'Ichokwadi sezvatinozviona' bhuku Martin Vrijland parizvino inowanikwa: Martin Vrijland
"Zviripo sezvatinozviona" bhuku Martin Vrijland parizvino riripo
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we25 September 2019	• 5 Comments
Mumakore achangopfuura ndagara ndichibvunzwa kuti sei ndisiri kuburitsa bhuku. Ini ndanga ndatoziva kuti bhuku iri rave kuda kuuya, asi mufananidzo wacho wanga uchiri kugadzira. Izvo zvinogona kurondedzerwa zvakanyanya sekumirira kupedzwa kwefaira rekutora pafoni yako kana komputa. Zvinotora chinguva kuti ruzivo rwese rugamuchirwe. Ini dzimwe nguva ndinobvunzwa kwandinowana ruzivo rwese. Semuenzaniso, vanhu vanokurudzira kuti ini pamwe ndinofanira kuverenga zvakawanda. Nekudaro, ndakaverenga zvishoma sezvingabvira, kunze kweiyo (fake) nhau dzenhau kubva kune main media media, nekuti ini ndinoshandisa zviitiko zvazvino kunongedza nzira dzinoshandiswa nemaassas nekurongwa.
Zvese zvatiri kunyatsoda kuziva hazvipinde kuburikidza nehuropi, asi zvinobva pakuziva kwedu kwepakutanga. Ndosaka ndakafananidza iyo download pamusoro.
"Zvinoitika sezvatinozviona" zvinotsanangura magadzirisiro akaita nyika uye zvakasikwa zvatiri kurarama mairi. Iko kushandurwa kwakadzama uye kwakarongeka kwehuwandu hukuru hwezvinyorwa izvo zvandakanyora nezve izvi pane ino webhusaiti. Mashoko akajeka anoita kuti rive bhuku rinowoneka kune ese mazera. Iri bhuku haringobvisa chero zvido zvechitendero kana zvemweya, asi zvakare rinopa kujekesa pamusoro pemhinduro kumatambudziko ese atinosangana nawo. Vatungamiriri vazhinji veMweya kana vezvitendero vanokutumira kune imwe nzira, asi zvakare kusimudza mamwe mabvunzo emibvunzo, kuitira kuti iwe hausati uine chokwadi uye chokwadi. Chinhu chinowanzo gaya. Ndine chokwadi chekuti bhuku iri rinobvisa chero kusava nechokwadi uye richaona kuti pakupedzisira unonzwisisa kwauri uye kuti nzira yekubuda iri nyore sei.
Nekuti ini ndakambotanga hwaro hwandinowanzo kunyora zvesaiti ino, ini handigone kukutengesa bhuku racho. Icho chingave chiri chekutengesa basa. Naizvozvo ndinokupa bhuku racho sechipo kana uchitora gore roga roga webhusaiti ino. Iye zvino vamwe varipo vanopa mari vanozofunga: "Ah, ini ndoda bhuku remahara". Nekudaro, nekuti ini handigoni kubhadhara kudhinda nekutumidzira mari kubva pasina, izvo zvinogoneka kana iwe ukatora chinzvimbo chitsva chegore. Nhengo yakadaro inotova chipo. Nechipo chako ndinogona kubhadhara kudhinda uye kutakura mutengo kubhuku racho. Pazasi iwe unogona kuona kuti bhuku racho rinotaridzika sei.
Inoshanda sei? Unodzvinyirirakuva nhengo, wobva wasarudza imwe nhengo yegore kana kumusoro. Watova mumwe nhengo yegore ye € 25. Iyo system inozobva yatumira yako yega yega gore kwandiri, kuti ndikutumire email yandinokumbira kero yekutumira kubva kwauri. Iruzivo haruna kuchengetwa neni uye hapana chichaitika kwariri, kunze kwekuti rwunoshandiswa kutumira bhuku kwauri. Nenhengo yegore rino iwe unonyatsova unopa kwegore uye unotsigira basa rangu kuti ndienderere mberi.
Chinyorwa chekutanga chinotarisirwa uye kuburitswa kwebhuku chichava munaNovember gore rino. Nekudaro, zvakakosha kuti iwe ugozova nhengo, nekuti zvese zvinoenderana nekugona kusangana nemari yekudhinda nekutumira. Nemipiro yako yenhengo iwe zvakare unotsigira basa rangu webhusaiti ino pamwe nemitengo yangu inoshanda.
Tags: bhuku, de, ari, Featured, Martin, nyika yakasununguka, ona, we, chokwadi, akadai
Ini ndakatanga ndine 'mutengi wepagore nhengo' kuwana bhuku, asi ini ndinogona kufungidzira kuti izvi zvakawandisa kune vakawanda. Ndokusaka ini zvino ndopa bhuku racho neyakajairwa gore rese nhengo. Zvadaro hapana chero chinhu chinosara, asi mushure mezvose zviri pamusoro pemutumwa.
Ingave iri pfungwa kutengesawo bhuku racho digitally se-e-bhuku? Ini ndinofunga izvo zvinogoneka nebol.com.
Ini ndichanyatso kuraira bhuku rako, ndiri kuda kuziva kuti zviri mukati zvinofambidzana sei nezvinyorwa zvaunazvo.
Zvichangove zvinoenderana nezvinyorwa zvako, asi zvakanyanyisa uye zvakatsanangurwa?
Zvakanaka ini ndichine mubvunzo wekuda kuziva. Wakagara uchitsanangura kuti pamusoro pekuenderana nenyaya dzazvino uye kutsvaga nekunyora zvinyorwa uye nekupona kwakawanda, zvinoita sezvingabvira kunyora bhuku panguva imwechete. Wakakwanisa sei kuzviita?
Sezvaungave iwe waona, ini saka ndinonyora mashoma zvinyorwa kuti ini ndakwanisa kusunungura nguva yeizvozvo.
Peter Westerhout akanyora kuti:
Ndiri kuda kuziva nezve bhuku iri
« Greta Thunberg UN kutaura kunotiyeuchidza kwe "vacheche vanokandwa kunze kwevanopinda" kutaura muIraq hondo
Papa Francis anoshevedza vatungamiriri venyika kuenda kuVietnam pa14 muna Chivabvu 2020 kuti ipanganise nyika »
Camera 2 op Iyo 'ghost mhuri' PsyOp (kushanda kwepfungwa): kutora rusununguko rwako uye kukwazisa 'pfungwa dzemapurisa'